LHRH-A2 kuti jekiseni Bovines & penguruve - China Ningbo Second Uwandu hwemakemikari
LHRH-A2 kuti jekiseni Bovines & penguruve
Luteinizing Uwandu hwemakemikari Kusunungura Uwandu hwemakemikari A2 kuti jekiseni (LHRH-A2) Corporation Ndiyo chete mugadziri ane vakapfuura GMP advertising kumba tichitarisa yakatsvuka zvokuvakisa Luteinizing Uwandu hwemakemikari Kusunungura Makemikari A2. [Description] chigadzirwa uyu chena Ndinoda-kuomeswa mabhuroko kana upfu. [Rinoshanda uye kushandiswa] Polypeptide kemikari zvinodhaka. Inogona kukurudzira mhuka Anterior pituitary kuti secrete luteinizing kemikari (LH) uye follicle-anotokonya kemikari (FSH), mauri pakunamata ovarian follicles ...
L uteinizing H ormone R eleasing H ormone A 2 kuti jekiseni (LHRH-A 2 )
Iyi Corporation ndiyo chete mugadziri ane vakapfuura GMP advertising kumba in terms of the raw materials for Luteinizing H ormone R eleasing H ormone s A 2.
Polypeptide kemikari zvinodhaka. Inogona kukurudzira mhuka Anterior pituitary kuti secrete luteinizing kemikari (LH) uye follicle-anotokonya kemikari (FSH), mauri pakunamata ovarian follicles kunokurudzirwa kuti ovulate. It inowanzoshandiswa kurapa ovulation hysteresis, vakaneta ovaries, kuramba corpus luteum mbeu uye ovarian cysts kuti dheri mhou. Inogona kukurudzira spermatogenesis mhuka makono.
Mumwe dose nokuti intramuscular jekiseni:
Per dheri mhou:
1. Ovulation hysteresis: intramuscular jekiseni 25-50μg apo insemination iri rakatangwa.
2. Basa ovaries: 25μg, kamwe pazuva; rinogona kushandiswa 3 anotevedzana mazuva, uye yose dose haangakoni pamusoro 75μg; kazhinji, mugumisiro zvichava nani chete kana paine dzakabudirira ovarian follicle.
3. Ovarian cysts: 25μg, kamwe pazuva; rinogona kushandiswa 3-4 anotevedzana mazuva, uye yose dose haangavi pamusoro 100μg.
Kuvandudza Saizi nemarara: intramuscular jekiseni 25μg panguva kuberekesana
Kuvandudza pamuviri zvazvingava ndinoiitawo nemarara saizi uye dzekugonesa super-ovulation anokonzerwa: 15-25μg.
Previous: Gonadotropin nokuti jekiseni (GnRH)
Next: LHRH-A3 kuti jekiseni Bovines & penguruve
Lhrh-A2 For jekiseni Bovines & penguruve
Testosterone Propionate jekiseni (Androgen)